Iyo Yakanakisa yeMagetsi Meseji System yePMSes
Features » Zvoga Meseji
Taura ruzivo rwakakodzera panguva yakakodzera kune vashanyi vako kuti vabude mumakwikwi.
Varidzi vezvivakwa zvekuzorora uye mamaneja emakambani efurati anoshandirwa anokoshesa zvakanyanya kutaurirana kwavanako nevashanyi vanobhuka kuti vagare pazororo ravo lets kana aparthotels. Panguva imwecheteyo, mabhizinesi ekugamuchira vaenzi anouya nemabasa zviuru nezviuru, saka otomatiki inodaidzwa chero pazvinogoneka.
Pane imwe nguva mabhuku evaenzi zvinogona kunetesa kuve nemaoko kutumira iwo iwo iwo ruzivo, chete kuti usatowana mhinduro. Izvi kazhinji zvingangoda kuteverwa neSMS inotumirwa kumuenzi kuti avabate. Kupfuurirazve pasi penzira yekubhuka uye kugara kwemuenzi, huwandu hweruzivo hungangoda kupfuudzwa kumuenzi. Panguva imwecheteyo, zvakakosha kuti kumwe kunzwisisika senge makodhi ekupinda, haatumirwe kunze kwekunge macheki ese akaitwa uye mari ichibviswa zvizere. Nemaoko kuteedzera ese aya mamiriro nenzira kwayo kune vashanyi kubhuka mumigwagwa yakawanda zvingangoita zvisingaite kune vanobatirana.
Zeevou's Automated Meseji Inogona Sei Kubatsira?
Chikwata chedu kuZeevou chakagadzira huwandu hwezvinhu zvekubatsira kurerutsa uye kugadzirisa kutaurirana nevashanyi. Chero ani muenzi anosaina naZeevou anopihwa seti yemapuratifomu ematanho akasiyana emapoinzi erwendo rwevaenzi. Aya matemplate ese anodhonza iyo muchiso's logo uye ruzivo rwekuonana, uye uve neakanaka HTML dhizaini. Uyezve, iwe unogona kugadzirisa kana kuumbiridza matemplate aya, kana kugadzira zvitsva zvachose kubva pakutanga.
Kwete chete iwe unogona kugadzirisa matemplate, asi iwe unogona zvakare kuseta yako wega tsika inotangisa mitemo. Pamutemo wega wega wekutangisa unogona kudoma seakawanda mamiriro sezvaunoda izvo zvinoda kusangana pamberi pematemplate emoto. Iwe unogona zvakare kusanganisira chinongedzo nemutemo wekutangisa, senge imba template, cheki-mukati gwara kana invoice yevaenzi.
Notifications dzinogona zvakare kuteedzerwa kune vevashandi kana echitatu bato email kero. Kunze kwekukwanisa kuita maemail nenzira iyi, kusangana kwaZeevou na DzvanyaTumira zvakare inobvumira varidzi kushandura mameseji eSMS kune vashanyi nevashandi. Semuenzaniso, unogona kuwana SMS inotumirwa kuvaenzi panguva yekubhuka kuti uvabvunze kuti vatarise maemail avo, kana kuti vazivise vachengeti vemba yehutsva hutsva kana vasiri kushandisa iyo Mobile Anwendung kuti isu takagadzira yekuchenesa, kana kutozivisa cheki-in vashandi kana muenzi awana yakasimbisa nguva yavo yekuuya muhurongwa kuitira kuti vakwanise kunanga kune chivakwa kuti vavabvumire kupinda.